Iflethi okanye indlu ekwicomplex entle ekufutshane nolwandle - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex entle ekufutshane nolwandle
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguKatarina
Igumbi elitsha elinomgangatho ophantsi okufutshane nolwandle
Ifulethi elitsha, lale mihla kwaye lipholileyo eliphakamileyo eMalinska, kufutshane nolwandle. Indawo yokuhlala inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye newasha yezitya, igumbi lokuhlala elipholileyo elineTV enkulu kunye negumbi lokutyela langoku, igumbi lokuhlambela elinewasha kunye neshawari yokuhamba, igumbi lokulala elitofotofo elinebhedi enkulu kunye nomnyango webalcony yothando apho unokonwaba khona. iingokuhlwa zasehlotyeni.
Indawo yokuhlala ikwi-500m ukusuka kwiilwandle ezintle. Ulwandle olunye (ulwandle iVrtaca) lulungele abantwana kunye neentsapho. Enye (i-beach Malin) ilungile kubantu abancinci kunye nabatshatileyo apho une-bar bar rhoqo kunye nomculo ophilayo, i-volleyball yase-beach, i-jet ski ...) Kukho indawo yokutyela efanelekileyo, ivenkile kunye nevenkile kunye ne-cafe. Yonke into isondele. Ungafikelela ngokulula kumbindi ngonxweme lolwandle apho unazo zonke ezinye iindawo zokutyela, iibhari zaselwandle, iikhefi, iivenkile ezikwizibuko. I-Malinska yindawo efanelekileyo yokuhlala, kuba ukusuka apho unokuhlola isiqithi sonke. Akukho nto ikude. Ngemoto uza lula kwi-10-15 min ukuya eKrk, ePunat, eVrbnik okanye eBaska (30min).
Sihlala kumgangatho osezantsi ngoko kuyo yonke imibuzo ungalibazisi ukusibuza. Siya kukuvuyela ukukunika ulwazi malunga neMalinska ezininzi iingcebiso malunga nokuthumela iholide ethandekayo kwisiqithi.